टोगोमा बैंक खाता कसरी खोल्ने? - ALinks
के म टोगोमा बैंक खाता खोल्न सक्छु?
एक विदेशी नागरिकले उचित कागजी कार्य र प्रारम्भिक लगानीको साथ टोगोमा बैंक खाता खोल्न सक्छ। आर्थिक नियमहरू र कर संरचनाहरूमा आधारित, अन्तर्राष्ट्रिय खाताहरू र लगानीहरूको लागि यो अवसरले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ।
Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce एक व्यावसायिक र लगानी बैंक हो जसले उप-सहारा अफ्रिकाका धेरै देशहरूमा सेवा गर्दछ। लिबिया बैंकको मुख्यालयको घर हो।
मुख्यालय: त्रिपोली, लिबिया
2. इकोबैंक टोगो
1985 मा, Ecobank Transnational स्थापना भएको थियो। Ecobank टोगोमा आधारित एक वाणिज्य बैंक हो जसले 36 अफ्रिकी देशहरूमा सञ्चालन गर्दछ। सरकार, वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय, SME, र व्यक्तिहरूले बैंकको थोक, खुद्रा, र लगानी बैंकिङ सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्छन्।
ठेगाना: 2365, Boulevard du Mono - BP : 3261, Lomé, Togo
बन्द ⋅ 8:30AM खुल्छ
फोन: +228 22 21 03 03
3. संघ Togolaise de Banque
डिपोजिटरी क्रेडिट मध्यस्थता उद्योगले लोम, टोगोमा रहेको UNION TOGOLAISE DE BANQUE समावेश गर्दछ। यस स्थानमा, UNION TOGOLAISE DE BANQUE ले 200 जनालाई रोजगारी दिन्छ र $33.76 मिलियन राजस्व (USD) उत्पन्न गर्छ। (कर्मचारीहरूको संख्या अनुमान गरिएको छ, र बिक्रीको संख्या मोडेल प्रयोग गरेर गणना गरिन्छ।)
ठेगाना: 47VF+9WF, लोमे, टोगो
बन्द ⋅ 7:45AM खुल्छ
फोन: +228 22 23 43 00
टोगोमा बैंक खाता कसरी खोल्ने
सोमालिया मा एक बैंक खाता कसरी खोल्ने?